Gudoomiye Dhoobo Waa Xaaraan xil ka qaadistii la igu sameeyey. – Kismaayo24 News Agency
Gudoomiye Dhoobo Waa Xaaraan xil ka qaadistii la igu sameeyey.
by admin 7th November 2019 7th November 2019 0198
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobodaareed) oo wareysi siiyay BBC-da ayaa u sheegay in aysan “sharci ahayn” codkii maanta baarlammanka ee xilka looga xayuubiyay.
“Waxaanu leenahay nidaam iyo hannaan, waxaanu leenahay shuruuc uu ugu sarreeyo dastuurka. Haddaanu nahay baarlamaanka, waxaan leenahay xeer-hoosaadka golaha. Haddaanu labadaa midna waafaqsanayn, waa xaaraan, waxna kama jiraan, mana ansaxayo”, ayuu yiri Dhoobo.
Arrimaha ay soo qaateen waxaa ka mid ah sida ay sheegeen in uu yiri guddoomiyaha in “Puntland ay dhisteen oo ay qabsadeen saddex qabiil, arrintaas oo ay shegeen in ay meel ka dhac ku tahay sharciga Puntland”.
Sidoo kale xildhibaannada mooshinka gudbiyay waxay ku doodayeen in “gudoomiyaha uu xarunta Barlamanaka geeyay “Maleeshiyaad hubeysan”.
Balse Cabdixakiin ayaa beeniyay eedahaas oo dhan wuxuuna yiri: “Ma jirto xeer hoosaad aan jebiyay. Golaheyga si wanaagsan ayuu ku socday, tii shalay u dambeysay si fiican bay u qabsoontay. Gudoonkeygaan la tashanayay oo hareeraha iga fadhiyay, golahaan la tashanayay. Wax la wada qaatay bay ahaayeen”.
“Waxaa nakala saaraya; in uu xaq yahay ama in uu xaraan yahay, waxa iigu qoran dastuurka iyo xeer hoosaadka, qaabka aan xilka ku waayi karo”, ayuu hadalka sii raaciyay.
“Anigu sifo sharci ah baan ku imid, sifo sharci ahna waan ku tagayaa”, ayuu sheegay Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland.
Wuxuu ku andacoonayaa in xildhibaannada “culeys la saaray, lacagna loo qeybiyay”, inkastoo taasi aan si madaxbannaan loo xaqiijin karin.
SAWIRRO:Munaasabadda daahfurka Madasha xisbiyada Qaran oo muqdisho kasocota.
Turkiga Oo Sheegay In Ay Ganacta Ku Dhigeen Xaaskii Abubakar Al-Baqdaadi
XOG: Ma fududahay in Madaxweynaha Mareykanka Trump xilka laga qaado?
admin 10th November 2019 10th November 2019
FAALLO : “Hal-abuurkii Qaran ee hiilka waayey ” W/Q Wariye Maxamed Jaamac Faarax.
admin 29th July 2016 30th July 2016
Akhriso: Waxa Sababay In La Doorto Jawaari.